Tontolon’ny Bilaogy Hindi: Fidiram-bola Amin’ny Dokambarotra, Bollywood sy Tantara Hafa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jolay 2017 14:23 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra efa nivoaka tamin'ny volana Febroary taona 2008 ity adika amin'ny teny Malagasy eto ity)
Tsy manana olana amin'ny fametrahana dokambarotra ireo bilaogera maro manoratra amin'ny teny Anglisy ary maro amin'izy ireo no miteraka fidiram-bola ampy avy amin'ny bilaogin'izy ireo. Saingy tonga ny olana rehefa tsy mibilaogy amin'ny teny Anglisy ianao fa amin'ny teny hafa satria manomboka mihena ny safidinao amin'ny dokambarotra. Saika tsy misy mihitsy ny fidiram-bola avy amin'ny fandaharana toy ny Google AdSense rehefa mibilaogy amin'ny teny Hindi.
Ny hany tranonkala Hindi miteraka fidiram-bola tsara sy sahaza dia na ireo tranonkalam-baovao lehibe an'ireo tranom-baovao na ireo vavahadin-tserasera lehibe sy malaza, izay mahazo dokambarotra mivantana mihoatra noho ireo fandaharana dokambarotra tahaka ny AdSense. Saingy mihatsara kosa ny zava-drehetra hoy i Jitendra Chaudhary tamin'ny tafatafa niarahany tamin'i Bol Halla. Fantatra amin'ny anarana hoe Jitu eo amin'ny tontolon'ny bilaogy Hindi, mpitantana ankehitriny sy mpiara-manorina ny bilaogy Hindi malaza Narad, nilaza izy fa tokony hanoratra lohahevitra manokana sy hikolokolo ny bilaogin'izy ireo ny bilaogera Hindi.
Mihevitra izy fa hiroborobo tsy ho ela ny tranonkala Hindi ary noho izany, hitaky votoaty tsara ireo tranonkala lehibe ary afaka manatanteraka ny fangatahana ny bilaogera Hindi. Ilaina ihany koa ny mandinika fa nanomboka nipoitra tamin'ny fandaharana dokambarotra misokatra ho an'ny rehetra, tahaka ny Google Adsense ny dokambarotra amin'ny teny Hindi ary hanomboka hanatona an'ireo bilaogy malaza ihany koa ireo mpanao dokambarotra mivantana atsy ho atsy.
Ary raha mino ny sasany ianao, nahazo fifaninanana avy amin'ilay tsy iza fa mpilalao sarimihetsika tsara tarehy amin'ny Bollywood, Shilpa Shetty (ilay nandresy tamin'ny fandaharana Big Brother tao Angletera) sy namoaka kapila mangilatra azy manokana vao haingana momba ny yoga !! 😉 ilay mpanao yoga malaza, Baba Ramdev. Ary tsy mbola tapitra; misy ny sahoan-dresaka milaza fa nangataka sarany 10 tapitrisa INR tamin'ny mpanatontosa iray ilay mpilalao sarimihetsika Bollywood, Mallika Sherawat, mba hanao hira amin'ny sarimihetsika-ny saingy niala haingana dia haingana tokoa ilay mpanatontosa ka mety hahamenatra an'i The Flash!! 😉
Araka ny nolazain'i Harshawardhan taminay, mankalaza ny faha-121 taonany ny Oniversite Allahabad ary manatontosa fihaonan'ireo maintimolaly rehetra amin'ny faha-16, faha-17 sy faha-18 ny volana Febroary 2008, hetsika iraisampirenena miaraka amin'ny lanonana rindra-kira sy fikaonan-doha (symposium)